सरकारले तयारी मदिराको पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटायो
काठमाडाैं, २५ असाेज । सरकारले तयारी मदिराको पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएको छ ।
२०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तयारी मदिराको पैठारीमा रोक लगाइएको थियो ।
विदेशी कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिक सुविधा प्राप्त संघ संस्था र विदेशी कर्मचारीले निजी प्रयोगका लागि बढी मूल्यका सवारी आयात गर्ने बाटो सरकारले खुला गरेको हो ।
५० हजार डलरभन्दा बढीका सवारी आयातमा बन्देज लगाउँदा कुटनीतिक नियोगलाई कठिनाइ परेकोले फुकुवा गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बताए ।
यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरेको छ । हरि खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्रविक्रम लाखे, राजेशकुमार गुरुङ, सुमित्रा चौधरी, नन्दा बस्याल, ऐकेन्द्र कुँवर, चन्द्र बदाना राई र महोम्द सागिर सेदलाई परिषद सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो ।
यस्तै किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षमा डा. वशिष्ट प्रसाद रिजाल, सिंहदरबार बैद्यखना विकास समितिको अध्यक्षमा डा. बाबुराजा अमात्य, औषधि परामर्श परिषद सदस्यमा प्रा डा. संगरत्न बज्राचार्य, बाबुराम हुमागाइ र दीपकप्रसाद दाहाल नियुक्त भएका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति अध्यक्षमा प्रा डा. देवबहादुर रोका क्षेत्री नियुक्त भएका छन् ।
यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवमा समशरण पुडाशैनीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान जनशक्तिबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा ५० जना र मातहतका चार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जना खटाउन सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।